QALBI-DHAGAX: Aniga oo qaawan oo caga cad ayey dowlada i dhiibtay (Sawirro) - Caasimada Online
Home Warar QALBI-DHAGAX: Aniga oo qaawan oo caga cad ayey dowlada i dhiibtay (Sawirro)
QALBI-DHAGAX: Aniga oo qaawan oo caga cad ayey dowlada i dhiibtay (Sawirro)
Nairobi (Caasimada Online) – Sarkaalka ONLF Cabdi Kariin Muuse Qalbi-Dhagax oo maalmo un ka hor laga sii daayay xabsi ku yaalla Addis ababa ayaa magaalada Nairobi uga qeybgalay munaasabad looga hadlaayay arrimo kala duwan.
Munaasabada oo aheyd mid si gaara loogu qabtay Sarkaalka ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay arrimaha Somalia, waxaana halkaa khudbado kala duwan ka jeediyay Qalbi-Dhagax iyo qaar kamid ah Mucaaradka dowlada.
Khudbadaha ugu badan ee munaasabada kabaxay ayaa waxaa jeediyay Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Somalia kuwaa oo siyaasad ahaan aad uga soo horjeeda dowlada Somalia.
Qalbi-Dhagax ayaa inta uu ku guda jiray khudbadiisa ka sheekeeyay qaabkii ay ula dhaqantay dowladda Somalia iyo sida loogu wareejiyay dowladda Ethiopia.
Qalbi-Dhagax, waxa uu sheegay in dowlada Somalia ay ka dhoofisay magaalada Muqdisho isaga oo aan xiligaa isku arag mid danbiile ah.
Nuqul kamid ah khudbada Qalbi-Dhagax ayaa aheyd “Aniga oo indho duuban, cago cad, qaawan, ayaa Muqisho la iga dhoofiyay, balse waxaan ogaaday in aan leeyahay 30 milyan oo walaalo Soomaaliyeed ah”
Qalbi-Dhagax, waxa uu intaa ku daray in qaabka loogu wareejiyay Ethiopia ay muujineyso inay tahay mid fariin u ah Umadda Soomaaliyeed waxa uuna cadeeyay inay suuragal tahay in muwaadin waliba uu mari karo halka uu hadda maray isaga.
Dowladda Soomaaliya weli kama hadlin siideyntii dowladda Itoobiya ee Qalbi-Dhagax oo ay ku wareejisay Bishii Agaust Sanadkii tegay ee 2017 marka laga reebo in dowladda Itoobiya ay shaacisay in dowladda Soomaaliya ay ka dalbatay siideyntaas.